Tekinika milalao lalao fitifirana trondro an-tserasera dia tena mahasoa - BitExpert
Текущее время: 06 июл 2020 23:48
Tekinika milalao lalao fitifirana trondro an-tserasera dia tena mahasoa
Сообщение Yortvandy8899 » 31 янв 2020 20:02
Tekinika milalao lalao fitifirana trondro an-tserasera dia tena mahasoa.
Raha tianao ny milalao trondro fitifirana an-tserasera mba hahazoana tombony dia tokony hisafidy ny milalao amin'ny endrika efitra anatiny. Izany rehetra izany dia ampahany lehibe amin'ny fisafidianana ny efitrano ary ny fampiasana am-bala amin'ny fitifirana trondro dia ny fampiasana vola ampiasaina amin'ny kajy. Tokony hampiasa ny famakafakana tsara indrindra, aza manipy bala mety hisafidy trondro, tokony hifidy ny karazana trondro mba hiezaka milalao amin'ity lafiny ity, filokana tsara, mampiasa teknika fitandremana mba hahatratrarana ny tanjona irina. paoypaet.com
Ny fahafinaretana amin'ny filokana an-tserasera Lalao filokana an-tserasera iray hafa novolavolaina mba hiavaka amin'ny fomba filokana amin'ny lalao ankapobeny Sary mahafinaritra sy fifaninanana mahafinaritra mandritra ny lalao dia lalao filokana izay tsy mitaky kajy maro. Alefaso fotsiny ilay trondro mahitsy sy araka izay azo atao .. Ity loka ity dia hanome anao be dia be. Na izany aza, ireo izay afaka mandray anjara amin'ny fahafinaretana ary mifantoka amin'ny filokana tsara, ny fahafahan'ny mpikambana rehetra mandray anjara amin'ny filokana tsirairay dia tsy dia matotra loatra ary vonona hanome vola hahazoana fandresena ny haza trondro. Maro Afaka mahazo isan'andro, mifantoka amin'ny fanaovana vola tsy manam-petra
Fitsipika sy fomba momba ny filalaovana ny lalao fitifirana trondro.
1. Rehefa miditra amin'ny efitrano fitifirana trondro an-tserasera dia hanana efitrano hahafahantsika milalao isika, tsy mitovy ny efitrano tsirairay, miaraka amin'ny vidim-bidy kely indrindra manomboka amin'ny efitrano fanombohana. (Mety ho an'ny vao manomboka) vidin'ny bala amin'ny 1-9 baht, efitrano ambony 1 - 100 baht an'ny bala sy emperora 100 - 1 000 baht (mety ho an'izay mahalala ny teknika rehetra, afaka milalao ary manam-pahaizana)
2. Mila misafidy ny isan'ny akorandrefitra ampiasaina isika fa tsy 1 baht isaky ny boribory, fa manomeza hevitra fa 2 baht isam-bolana isaky ny bala, satria rehefa mitrandraka trondro be ianao dia hahazo valisoa bebe kokoa. Afaka jerena amin'ny sary eto ambany
3. Amin'ny tifitra trondro maty, trondro maty, dia hahazo valisoa avy hatrany isika. Ny loka dia kajy toy izao manaraka izao: vidin'ny sandoka x isa trondro = vola valisoa, toy ny bala 2 baht x x trondro be mahazo 50 isa = 100 valisoa valisoa 100.Tondro isa na karazany maromaro isaky ny karazana trondro dia ireto manaraka ireto: (Jereo bebe kokoa avy amin'ny menio trondro trondro)
Soso-kevitra sy toro-hevitra momba ny lalao tifitra trondro, ny fomba filalaovana hahazoana vola.
Trondro.Mony mivoaka ny efijery izy ireo, ny trondro vaovao miaraka amin'ny rà dia heverina fa hiverina tanteraka.
Ny fakana ny famerenam-baravarankely na faneren-tena fotsiny dia tena mampidi-doza. Ary milomano mankany aminay izy, dia ho faty mora, na mahalala hahafahanao / manakana ny fitifirana mandeha ho azy raha te hampiasa azy io ianao.
.Aza manaparitaka ny trondro latsaka avy eo amin'ny efijery isaky ny 6-7. Tsy maintsy hanova ny sehatra ianao. Afaka miandry amin'izany fotoana izany ianao. Satria hisy trondro eo akaikin'ny tsirairay avy, ka mora kokoa ny maka sary
. Raha manana teti-bola kely dia tsy tokony hitifitra trondro be dia tokony manangona teboka amin'ireo trondro kely mba hahazoana vola bebe kokoa.